Home Wararka Axmad Madoobe oo la filayo in uu maanta shaaciyo liiska ku tartamaya...
Axmad Madoobe oo la filayo in uu maanta shaaciyo liiska ku tartamaya Aqalka Sare
Sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya magalaada Kismaanyo, Waxaa maanta la filayaa in Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe uu shaaciyo liiska musharaxiinta Aqalka sare ee Jubbaland.
Wararka ayaa intaas ku daraya in liiska la filayo aaney ka marnaan doonin inta badan kuwa maamulka uu raali ka yahay halka kuraasta qaar laga yaabo in aan lala tartaminba! Soo bandhigidda liiska waxaa xigi doona in la siiyo musharaxiinta labo maalin oo olole ah, halka sidoo kale lasoo dhejin doono waqtiga khudbadaha iyo xilliga doorashada.
Jubbaland sida ay u qabato doorashada Aqalka sare waxay fure u noqon doontaa sida ay u dhaceyso doorashooyinka kale. Waxaa kale oo sheegayo in uu Axmad Madoobe oo doonayo in uu ka hortago carqalado kaga timaado Farmaajo iyo kooxaha la safan oo aaminsan in wixii ka danbeeya busha Luulyo 31keeda in uusa Axmad Madoobe ahaan doonin madaxweynaha sharciga ee Jubbaland.